ODP filannoo dhuftuuf kaadhimamtoota ciccimoo qopheessaa jiraachuu beeksise – Fana Broadcasting Corporate
ODP filannoo dhuftuuf kaadhimamtoota ciccimoo qopheessaa jiraachuu beeksise
Finfinnee, Qaammee 2,2011(FBC)- Oromoo Demokraatiik Paartii(ODP) filannoo dhuftuuf kaadhimamtoota ciccimoo qopheessaa jiraachuu beeksise.
Paartichi akka durii maallaqa mootummaatin duula na filadhaa akka hin gaggeessinnes ibseera.
ODP duula na filadhaa filannoo dhuftuutin galii miseensota isaarraa argatuun kan gaggeessu ta’uu beeksiseera.
Paarticha faaynaansiin cimsuuf bara bajataa xumurametti Birrii miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 99 ta’u miseensota isaarraa funaanera.
Waajjira ODPtti itti gaafatamaan Ijaarsa Siyaasaa Baadiyyaa obbo Awwaluu Abdiin Dhaabbata Preesii Ityoophiyaatti akka himanitti, bara haaraatti immoo Birrii biiliyoona tokkoo ol ta’u miseensotarraa sassaabuuf karoorfateera.
Wantoota filannoo bara 2012 gaggeeffamu adda taasisan keessaa tokko akka dura baratametti baajataa fi konkolaataa mootummaatti fayyadamanii duula na filadhaa gaggeessuun hafuu isaati jedhaniiru.
Kana hubachuudhanis paartichi galii miseensotarraa argatu dabaluuf hojjachaa jiraachuu himaniiru.
Bara haaraatti miseensota haaraa kuma 800 ta’an horachuuf karoorfamuusaa fi kun immoo sochii galii paartichaa guddisuuf taasifamu kan deeggaru ta’uu dubbatu.
Baay’ina miseensotaa qofarratti osoo hin taane, miseensota ciccimoo fi kaayyoof amanamoo ta’anirratti xiyyeeffatamuu isaa fi filannoo itti aanuufis bu’uuruma kanaan qophiin taasifamaa jiraachuu himaniiru.
ODPn yeroo ammaa miseensota miiliyoona 2.5 akka qabu ragaaleen ni mul’isu.
Feestivaalli Jiila Gadaa Finfinneetti gaggeeffamuufi
Qajeelfamni bobbii tajajaila taaksii elektirooniiksii qophaa’e
Ayyaanni Ashuuraa kabajame
Qabxiin seennii barnoota sadarkaa qophaa’inaa ifoome
Sagantaan simannaa seensa dhaabbileen barnoota olaanoo…
Gochaa sukkanneessaa qaama adda hin baanen raawwatame…
METEK gamoo baasii Birrii miiliyoona 108 itti baase baatii…